MID KA MID AH DHEGTA AYAA KU DHACAY CARAB: SABABAHA LOO SAMEEYO - XOOLAHA
Waa maxay sababta uu bakaygu leeyahay hal dheg?
Qufacu waa sharaf weyn iyo qaybta ugu muuqata jirka ee marin kasta. Si kastaba ha noqotee, xitaa xaaladaha saxda ah ee lagu hayo, waxaa laga yaabaa inaad aragto mid ama labada dhegood ee xayawaanku hoos u dhaceen ama dhajiyay. Bal aynu eegno sababta ay taasi u dhacdo, waxa la sameeyo iyo sida looga hortago.
Sababaha maqaarka ee dhagxaanta
Tani waxay noqon kartaa sababo kala duwan. Qaar ka mid ah uma baahna wax faragalin ah, halka kuwa kale, lid ku ah, waxay u baahan doonaan waqti badan iyo dadaal si loo saxo xaaladda.
Dhaawaca maqaarka, jajabka ee kilyaha dhegta
Haddii mid uun dhegta xayawaanku daaqo, markaa sababtu waxay noqon kartaa saameyn farsamo - dhaawac ama qaniinyo. Gaar ahaan inta badan waxay taasi dhacdaa haddii dad badani ay ku nool yihiin aag yar oo ay bilaabaan inay muujiyaan gardarrada midba midka kale. Dhaawacyada sidoo kale waxay dhacaan marka dhaco, sababtoo ah walxaha fiiqan oo aan la caddayn, marka ay ku xayiran yihiin xubno astaamo ah, unugyada mesh ama feeders. Qaadashada xayawaanka dhagaha ka dambeysa dhegaha ayaa sidoo kale keeni kara waxyeello, maadaama aan loo qorsheynin culeysyada culus.
Ma taqaanaa? Khamrigu waa musiibo weyn oo u ah qaarada Australiya, taas oo keenaysa waxyeello ka badan $ 600 milyan sannadkii, hanjabaadda jiritaanka noocyada kale ee xayawaanka naadirka ah iyo keenista xumaanshaha ciidda. Gobolo badan, iyaga oo haysanaya xayawaan waa la mamnuucay. Marka, Queensland waxaa lagu ciqaabi karaa ganaax dhan 30 kun oo doolar.
Kor u qaadista bakaytka dhegta, waa mid aad u fudud in la fidiyo ama xitaa waxyeello u geysta dabiiciga ah waxayna horseedi kartaa luminta shaqeynta maqalka maqalka. Si loo daweeyo jabka waxaa lagama maarmaan ah in lagu soo rogo kabo. Xilligaan soo jiid jimicsiga ma aha mid u qalma, haddii kale garaacisku wuxuu isku badali karaa khalad. Waa in sidoo kale la ogaadaa in kuwa weyn ee bakayle, sii dheer bogsiinta noqon doonaa. Nasiib wanaag, dhaawacyada ayaa aad ugu yar dadka shakhsiyaadka ah marka loo eego kuwa dhallinyarada ah. Sida taayir, waa wanaagsan tahay in la isticmaalo gabal kaarar baakado ah oo saddex-qaabab leh.
Duumada waa inay ahaataa geeso wareegsan, si aanay u dhaawicin xayawaanka, ugu yaraan 5cm dherar ah oo gebi ahaanba ka buuxda xariijinta jajabka ee width. Si loo xiro dhagxaanta dhegta, waxaa loo isticmaalaa dhejis laba-dhinac ah. Aan ka horeyn 14 maalmood kadib markii la isticmaalay finanka, habka wax lagu xiro waa la baari karaa. Marka la eego nooca dhaawaca iyo astaamaha shakhsi ahaaneed ee qofka, waxay qaadan kartaa bil ama kabadan si loo dhammeeyo bogsashada. Si loo dedejiyo geedi socodka dib u soo celinta jooniska, waxaad isticmaali kartaa diyaargarow gaar ah oo ku saabsan koritaanka iyo fiyuuska unugyada cirbadaha (chondroprotectors). Qaar ka mid ah jajabka ayaa dhegahooda dhegta ku dhejiyaa mid caafimaad qaba adigoo isticmaalaya cajalad cirif leh si loo hagaajiyo qolka. Sidaa awgeed, xalinta tooska ah waxay sahlaysaa habka dib u hagaajinta.
Jiritaanka jirka ajnabiga ah
Shay ka mid ah kanaalka dhegta wuxuu si xun u saameeyn karaa hababka neerfaha iyo wareegga xayawaanka oo keena in la yareeyo dhegta. Calaamadaha shayga shisheeye ee dhegta xayawaanka waa in ay si joogto ah u ruxruxo dhagahooda, madaxa u leexdo oo u jeedaa dhinaca ay saameysey. Bakaygu wuxuu noqdaa mid aan xasillooneyn oo lumiya cuntadiisa.
Waa muhiim! Qaadashada bakaylka dhagaha ayaa gaar ahaan khatar u ah dadka waaweyn iyo kuwa culus. Iyada oo kor loo qaado, dhaqdhaqaaqa hoosta ee diaphragm wuxuu dhacaa, xayawaankuna wuxuu ku dabooli karaa ama jeexi karaa wadnaha.
Haddii ay suurtagal tahay, waa inaad si taxadar leh u isticmaashaa, adoo isticmaalaya cambeereerka leh dhamaadka dhererka, si aad u hesho jirro shisheeye, laakiin haddii ay tahay mid qoto dheer, waxaa wanaagsan inaad la tashato khabiir. Iyo mustaqbalka, waa inaad si joogto ah u baartaa dhagaha xayawaanka si loo ogaado dhibaatada waqtigeeda.
Aad u kulul
Dhegaha qumbaha waa mid aad u xasaasi u ah isbedelka heerkulka waxayna yihiin kuwa ugu horreeya ee ka jawaaba isbedeladaan. Xayawaanku waxay khatar ugu jiraan cimilada kulul, oo kulul, marka heerkulku ka sareeyo +25 ° C. Taas macnaheedu wuxuu ku sifeeyaa bakaylaha, isaga oo u muuqda inuu yahay cunto la'aan, murugo iyo lumis. Sidaas awgeed, socodka dhiigga ee dhagahooda waxay kordhinayaan isku day lagu qabsanayo hawlaha kulaylka, iyo tan iyo nidaamka qalooca ee dadka dhalinyarada ah weli wali horumar laga gaarin, taasina waxay keentaa in la yareeyo dhegaha. Cabsida ku saabsan tani maaha mid u qalma, sababtoo ah geedi socodkani waa mid la beddeli karo, islamarkaana heerkulka hawadu hoos u dhacdo, dheguhu waxay mar kale qabsanayaan meel taagan. Si kastaba ha ahaatee, si loo caawiyo, waa lagama maarmaan in la dagaallamo kulaylka iyo kulaylka unugyada leh xayawaanka siyaabo kala duwan. Waxaa sidoo kale wanaagsan in la dhamaystiro raashinka bakaylaha leh fitamiino dheeri ah, micro iyo macro macquul ah.
Waa in la ogaadaa in marxaladdaha daba dheeraadka ah ee heerkulku ka sarreeyo +50 ° C on unugyada cirridku keenaan waxyeelo burburin iyo aan dib loo noqon karin. Marka laga soo tago dhegaha dhicida, xayawaanku wuxuu heli karaa istaroog xoog leh oo kulaylka ah, markaa waa in aan loo oggolaan, gaar ahaan muddo dheer.
Baro sida loo daweeyo nabarrada bakaylaha
Sababta kale ee dhicitaanka dhegaha ee dhegaha ayaa laga yaabaa inay noqoto mid aan kuleyl lahayn ama muddo dheer oo qabow ah. Natiijada qabowga, xayawaanka ayaa noqda mid jilicsan, maqaarka hoostiisa oo hoosta jeexjeexa oo cagaar ah hoos u dhaco. Si looga hortago tan, waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo qolalka kuleylka ah ee jiilaalka ee bakaylaha, iyo haddii xaalad qabow, saliideyso meelaha ay dhibaatadu saameysey oo leh goose ama dufanka hilibka doofaarka. Iyadoo qaboojiye xoog leh, daaweyn leh 1% kaamil ah oo ka samaysan boogaha ayaa si fiican u caawiya. Isla mar ahaantaana waxaa lagama maarmaan ah in la saliido oo keliya meelaha la qalajiyey. Daawo kale oo wanaagsan ayaa ah Aluspray aerosol. Waxaa lagu dabaqayaa aagga ay dhibaatadu saameysey ka dib markii la hirgeliyo fayadhowrka hordhaca ah - ka saarida dhogorta iyo maqaarka dhintay.
Waa muhiim! Waa suurtagal in la daweeyo nabarrada dhegaha xayawaanka leh khamriga, oo ay ku jiraan iodine iyo cagaaran, sababta oo ah waxay taasi keeni kartaa gubasho maqaarka jilicsan ee bakaylaha.
Caarada subagga leh ama injirta
Mid ka mid ah sababaha ugu caansan ee dhagxaanta dhicitaan ee bakaylaha waa sheyga - shillinta iyo injirta. Qaniinyada qaniinyada caarada, kaas oo degay lakabyo subcutaneous ah, ayaa horseedaya xaqiiqda ah in bakayleedku uu bilaabmayo inuu shanlayo meelaha aafoobay. Xayawaanku wuxuu daciifiyaa burushka joogtada ah, wuxuu bilaabaa inuu diido raashinka, taas oo keenaysa in la'yahay xubno muhiim u ah jirka iyo hoos u dhaca dhagaha. Iyadoo guuldarro xooggan, wakiilka keena cudurku wuxuu qabsoomi karaa dusha jirka oo dhan, taas oo keenaysa suntan jirka, barar, barar iyo xitaa dhiig-yaraanta. Daaweynta cudurka waa in la fuliyaa oo kaliya hoosta kormeerka xoolaha. Dhaawacyada yaryar, aerosols iyo shampoos gaar ah ayaa loo isticmaalaa. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad daaweyso dhammaan dusha infakshanka daawooyinka acaricidal. Marka uu booguhu soo muuqdo, antibiyootiko badanaa ayaa loo qoraa. Wixii burburinta dhammaan shilinta waa in lagu daaweeyaa kafateeriyada cayayaanka iyo qolka bakaylaha. Xaalad la mid ah ayaa lagu arkay marka injirta ay muuqdaan xayawaan.
Meeshii qaniinyada waxay u egtahay dhibco casaan iyo barar yar, taas oo bakaylaha ay bilaabmeen in ay shanlaynayaan. Si aad uga takhalustid injirta waxay isticmaalaan 3-5% chlorophos boodhka, 2% boodh. Unugyada ayaa la nadiifiyaa oo la waraabiyaa lard kulul ama biyo keli ah. Qiyaas ahaan ka hortag, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo fayodhowrka nukliyadaha iyo marmar si baqshiish ah u baaro bacalka si ay u joogaan dulin. Xayawaanka cusub waa in si fiican loo kontoroolaa oo loo kariyaa.
Baro sida loo daaweeyo saxda ah bakayle.
Uma helin nafaqo wanaagsan oo leh dariiqada lagama maarmaanka ah ee fitamiinada iyo walxaha raadraaca, dhegaha bakaylaha ayaa dhici kara. Xaqiiqdu waxay tahay in unugyada calool-marijirta ah ee dhegaha cunnooyinka ay weli yihiin kuwo khafiif ah oo jilicsan oo keliya oo leh da 'ay ku dhacdo cufnaanta lagama maarmaanka ah. Intaas waxaa dheer, dhegtu waa in ay leedahay cufnaanta iyo dabacsanaanta, taas oo lagu go'aamiyo horumarka caadiga ah iyo tignaalka jirdhiska jirka. Marka laga hadlayo maqnaanshaha qalabka dhismaha ee muhiimka ah - kolajka iyo elastin - dhumucda kilyiyadu kuma sii socoto cabbirka dhegaha. Ka dibna maysan miisaankooda u haynin oo ay bilaabaan inay saxaan. Si looga hortago tani inay dhacdo, cunta cuntada bakteeriyada waa in la ilaaliyaa joogitaanka dhammaan fitamiinada, maadooyinka iyo macro ee lagama maarmaanka ah. Horumarka habboon ee kilyiyadu waxay ku xiran tahay zinc, selenium, iodine, chromium iyo nicotinoamide (fitamiin PP).
Macluumaadka quudinta warshadeed ee ku jira hal-abuurka ayaa had iyo jeer lagu muujiyaa calaamadda. Markaad isu diyaarinayso nafaqadaada, waxa fiican inaad isticmaasho buugga tixraaca oo aad hubiso in waxyaabahaas ay ku jiraan alaabooyinka aad siinayso bakayle. Waxay yihiin, tusaale ahaan, hodan ku ah lafaha iyo lafaha iyo cuntada lafaha. Iyo fitamiin PP waxaa laga helaa bakeeriga, hadhuudhka, baradhada, xididdo iyo saxarka qaraha.
Ma taqaanaa? Waashinka weyn ee adduunka ayaa ah haweeney shan jir ah oo magaceeda lagu magacaabo Amy oo ka timid magaalada Ingriiska ee Worcester. Miisaankaagu waa qiyaastii 19 kg, dhererkuna waa 1.2 m. Amy aad buu u weyn yahay in marti-geliyuhu aanu qaadi karin qafiskiisa qiyaasta miisaankuna wuxuu ku khasbanaaday inuu ku noolaado hareeraha eyga.
Haddii dhibaatada dhegta ka soo kacda ay ka soo kacdo ka soo horjeeda dabeecada soo dhaweynta raashin isku mid ah, markaa taasi waxay sababi kartaa hoos u dhac ku yimaada xasaanadda xayawaanka. Xaaladdan, waxaad isticmaali kartaa cunto dheellitiran oo khaas ah (BAA) oo ku salaysan warshad, tusaale ahaan, vitamin immunomodulator Gamavit.
Maanta, noocyo isku dhafan oo kobcaya ayaa si weyn u caan ah oo ka dhexjirta midabka bakayle. Xayawaankan oo kale mudo gaaban, xayawaanku waxay u baahan yihiin inay sameeyaan unugyo iyo nidaamyo muhiim ah - wadnaha, maraakiibta, sambabada, beerka, lafaha, kala-goysyada, iyo kuwa kale. Natiijo ahaan, qaar ka mid ah "yar yar" ee jirka ayaa laga yaabaa inay xanuunsadaan. Sidaa awgeed, xaddiga kobaca ee dhegta wuxuu bilaabmaa inuu kordho xaddiga qaabka qaabaynta calool-xanuunka, dheguna hoos bay u dhacdaa. Shakhsiyaadkaas waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo cunto ayadoo la isticmaalayo fitamiinada dheeraadka ah iyo taakuleenta ee qaabka loo yaqaan 'premixes'.
Inta lagu jiro molting degdeg ah iyadoon la qabsanin cuntada, furka bakaylaha waxay u muuqdaan kuwo gaaban. Iyo soo bixitaanka timaha cusub waxay u baahan yihiin enzymes isku mid ah, makro - iyo nafaqeeyayaal yar yar, sida dhisidda salka duufaanka dhagaha. Maadaama jidhka xayawaanku uu si caadi ah u daryeeli karo jaakad, quudinta caanuhu waxay noqotaa mid aad u yar, burburinta qandhada la sameeyay ayaa muuqata. Natiijo ahaan, dhegaha bunni waxay dhacaan. Xaaladdan, ma qaadan kartid wax tallaabooyin dheeraad ah, sababtoo ah dhamaadka dhagaha molting waa inay soo celiyaan booskooda. Si kastaba ha noqotee, hirgelinta dhismo dheeri ah oo vitamin-macdan ah oo cuntada ku jirta ayaa xawaareyn doona habkan.
Joogitaanka jeermiska bakteeriyada lop-ear
Had iyo jeer waxay dhacdaa in xaaladaha ka baxsan dibadda iyo caafimaadka dhameystiran ee xayawaanka, bakaylaha loo yaqaan 'bakter-eared' si tartiib tartiib ah u noqo laab laab. Dhibcaha, way soo baxaysaa, waxay ku jirtaa hiddo-wadaha. Way adagtahay in la caymiyo arrintan, gaar ahaan haddii aad ka iibsato xayawaanka guryaha gaarka ah, oo aan ku jirin xannaanooyin waaweyn. Waxaa intaa dheer, waxaa laga yaabaa in ay soo baxdo in awoowayaashii lafdhabarta ahaa xitaa aysan ahayn waalid, laakiin wuxuu ku gudbay jiilkiisa iyada oo loo marayo jiil.
Waa muhiim! Si kor loogu qaado wareega dhiiga ee unugyada caanaha naaska iyo dardar gelinta dhagaha dhagaha, waxaad si wakhti ah u duubi kartaa dhegaha. Nidaamkan waa in lagu sameeyaa cadaadis dhexdhexaad ah, dhageysiga dhagaha ka soo hooseeya iyo si tartiib ah u sii daaya korka sare. Sida caadiga ah massage waxaa fuliya by bakaylaha laaluush iyo waxay jecel yihiin wax badan.
Si looga fogaado xaaladdan oo kale, waa inaad ka qaadataa bakaylaha laga bilaabo jilayaasha aaminka ah, waxayna ka fiican tahay inaad ka iibsato xayawaan ka samaysan xayawaanka. Guud ahaan, halistu marwalba way sii jirtaa, waxaadna ku tiirsan kartaa nasiib wacan iyo kalsoonida iibiyeyaasha. Haddii xayawaankaagu uu lahaa awoowayaashii dhashey, waxaad u baahan doontaa inaad la soo baxdo, maadaama aysan suurtagal ahayn in la saxo booska dhegihiisa. Caadi ahaan arrintani si dhakhso ah uma muuqato, laakiin kaliya sida bakaylaha ay u koraan, dhagahooda ayaa noqda mid culus oo sagaar ah. Xaaladdan, mid ka mid ah dhegta mararka qaar waxay sii wadaan inay istaagaan.
Xeerarka aasaasiga ah ee daryeelka bakaylaha
Wixii horumarinta habboon ee bakaylaha, waa inaad raacdaa xeerarka:
qabanqaabiyaan qol nadiif ah, ballaaran oo dabaysha leh oo aan lahayn wax qabad;
si ay u bixiso kafeyn ballaaran oo leh baalalka, taraamka iyo gogosha - caws ama dhoobada;
maalin kasta isbeddel qashinka, ku dhaq saabuun iyo saxaarada;
toddobaadkii hal mar, si fiican u dhaqo loona nuugo dhammaan unugyada oo leh xal daciif ah oo ah kaneecada;
bixiyaan cunto buuxa oo dheellitiran;
maalin kasta si aad uga saarto hadhaaga cuntada ee ka soo baxa maddiibadda, raaci baaquli biyaha;
Dheecaan ka soo horjeeda myxomatosis, cudurka cagaarshowga cudurada viral iyo, kiisaska socodka dibedda, laga bilaabo cudurrada;
si joogto ah u shanlaa dhogorta, jarjar cirridka leh clipper ama cirbad gaar ah;
samee karantiil cusub oo cusub ee bakaylaha cusub iyo isla markiiba ka saar shakhsiyaadka buka.
Sidaas darteed, haddii xayawaankaagu hoos u dhaco, marka hore waxaad u baahan tahay inaad fahamto sababahaas oo aad u hubiso inaysan jirin cuduro. Isla mar ahaantaana, habka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo xaaladdan waa cunto dheellitiran, xaalado wanaagsan oo lagu hayo, kaneecada unugyada ee waqtigooda iyo daryeel habboon ee bakaylaha. Oo markaas dhegihiisuna waxay ahaan doontaa mid si qumman u socda.